विराटनगरको नोबेल शिक्षण अस्पतालमा गत मंगलबार देखी नउठेको शव सहमिति पछि उठ्यो
आफन्तले किरिया खर्च वापतको रकम पाएपछि मात्रै शव उठाएरको हो भन्छन् जनकारवालाहरु!
विराटनगर। विराटनगरको नोबेल शिक्षण अस्पतालमा ट्यूमरको शल्यक्रियाको क्रममा मृत्यु भएकी एक महिलाका परिवारका सदस्य र आफन्तले किरिया खर्च वापतको रकम पाएपछि मात्रै शव उठाएर लगेका छन् । त्यस्तै अस्पतालले उपचारमा लागेको रकम पनि फिर्ता गरिदिएको छ । किरिया खर्च र उपचारमा लागेको पैसा फिर्ताको माग गर्दै परिवारका सदस्यले तीन दिनदेखि शव उठाएका थिएनन् । ट्यूमरको शल्यक्रिया गरिएकी सोलुखुम्बु नोचासल्यान–४ की ३५ वर्षीय तारादेवी भट्राईको मृत्यु गत मंगलबार भएको थियो । उनको सोमबार दुई पटकसम्म शल्यक्रिया गरिएको थियो ।
शल्यक्रियाका क्रममा चिकित्सकले लापरबाही गरेकोभन्दै आन्दोलित बनेका आफन्त र परिवारका सदस्यले शव नबुजी अस्पतालमै छाडेका थिए । शल्यक्रिया गर्ने चिकित्सकलाई कारबाही हुनुपर्ने, पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिइनुपर्ने लगायतका माग राखेर आफन्त र परिवारका सदस्य आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । अस्पताल प्रशासन र मृतकका आफन्तबीच बिहीबार भएको वार्तामा जुटेपछि महिलाको शव उठेको छ । किरिया खर्च वापत एक लाख १० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराएर औषधिको ९३ हजार र उपचारमा लागेको एक लाख २३ हजार रुपैयाँ फिर्ता गर्न अस्पताल सहमत भएपछि शव बुझेर लगिएको पिडित परिवारका सदस्यले बताएका हुन् ।
त्यस्तै प्रा.डा. बराल बताऊ छ, " शल्यक्रियापछि ट्यूमरमा जम्मा भएको धेरै रगत एकै पटक बाहिर निस्कँदा अवस्था गम्भीर बनेर बिरामीको मृत्यु भएको हो।" ‘बिरामीलाई बचाउनका लागि धेरै मेहनत गर्दै सात पिन्टसम्म रगत चढाइयो,’ उनले भने, ‘तर पछि शरीरका अंगहरुले काम नै गर्न छाडे ।’ हामीले धेरै प्रयास गर्दा पनि बिरामीलाई बचाउन सकिएन।